Kutumira - Gemic
Please See Below nokuda kwedu Shipping Options:
Kutumira Kutakura - USD 35
Express kutakura kazhinji kutora mazuva 3-4 ekuendesa uye anogona kuteedzerwa online nhanho dzese dzenzira. Mapasuru ane inshuwarisi yakazara. Siginecha inodiwa pakuendesa. Kununurwa neMuvhuro kusvika Chishanu kune nyika zhinji. Kwete PO mabhokisi (kunze kweUAE, Saudi Arabia neKuwait), APO kana FPO kero dzinogona kushandiswa. Cherechedza: Kana iwe uine 'siginecha pafaira', ndokumbira ufonere EMS kuti ubvise iyi mvumo. Mapakeji anounzwa asina siginecha, nekuda kwe 'siginecha pane faira' haigone kuvharwa neinishuwarenzi anotakura.
Yakajairwa Kunyoreswa Tsamba - USD 7
Isu tinopa yakanyoreswa airmail kune nyika dzinopfuura zana nemakumi matanhatu. Tsamba yakanyoreswa inochengeterwa inosvika madhora mazana maviri emadhora. Kutumirwa kunotora mazuva ekushanda anosvika gumi nemaviri uye kunoda siginecha painounzwa. Iko hakuna kuendeswa neSvondo.
Matombo ese anoratidzwa se'anowanikwa 'arimo uye akagadzirira kutumirwa nekukurumidza. Mirairo inogadziriswa mukati me1 zuva rekushanda. Kubva Muvhuro kusvika Chishanu.
Zvimwe Information Munyika zhinji zvakatumirwa nenzira kwayo zvinotarisirwa zvinoenderana nemitero nemitero. Tsamba yakanyoreswa inotora nguva yakareba, asi kazhinji inodzivirira mimwe mari. Isu tinofara kutumira odha yako se "Chipo", asi ndokumbirawo uzive kuti isu hatina simba pamusoro pemamwe mareji anogona kuitika munyika yako.
Cherechedza: Kunze mutero kana basa ibasa remutengi. Zvidzoreso zvakadzorerwa zvinorambwa nekuda kwemhosva dzakadai hazvigone kugamuchirwa. Unogona kutibata kana iwe uchida chero akakosha marongero.
Invoices Ese mapakeji kubva kuGEMIC anosanganisira invoice yakazara. Ndapota taura nesu asati pakugovera hurongwa wako kana uchida kuva customized inivhoyisi kana pasina inivhoyisi zvachose.